गधाकाे दुधबाट बन्छ संसारकै महंगाे पनिर – Radiokathmandu गधाकाे दुधबाट बन्छ संसारकै महंगाे पनिर – Radiokathmandu
Posted on March 16, 2021 March 16, 2021 /2महिना अगाडी / 419 Viewed
चैत, काठमाण्डौं । संसारका हरेक मानिसको ‘फुड चेन’मा राम्रा,स्वादिष्ट र महँगा खाद्य पदार्थ रहेका छन् ।
पनीर ‘एनिमल प्रोडक्ट’ हो । पनीर विभिन्न जनावरबाट प्राप्त हुने दुधबाट बनाइन्छ । गाई, भैंसी र बाख्राको दुधबाट बन्ने पनीरबारे तपाईंलाई थाहै होला । तर, के तपाईंलाई थाहा छ त ? सबैभन्दा महँगो पनीर कुन जनावरको दुधबाट तैयार हुन्छ भनेर ?
तपाईंहरुले एक अर्कालाई होच्याउने क्रममा, गाली गर्ने क्रममा, आफू भन्दा कमसल देखाउने क्रममा कति पटक गधा भनी आत्मरति लिनुभयो ?
जैसाविका नामक यस फार्म हाउसमा पोथी गधाको दुधबाट पनीर बनाउने काम गरिन्छ । फार्म हाउसका मालिक स्लोबोदान सिमिक बताउनुहुन्छ – मेरो फार्म हाउसमा २०० वटा पोथी गधा छन् । म यसको दुधबाट विभिन्न खाद्यपदार्थका साथै पनीर पनि बनाउछु ।
सर्बियाका यी गधा पालक स्लोबोदान आफूले बनाएको पनीरका कारण प्रसिद्ध हुनुका साथै मालामाल समेत भएको सुनाउनुहुन्छ । फार्म हाउसमा बनेको पनीर संसारभरि नै लोकप्रिय भएको छ ।
ठूलठुला खाद्य स्टोरमा उहाँले बनाएको पनीर बिक्री हुनेगर्छ । गधाको दुधबाट बनेको पनीरको बजार भाउ प्रति किलोग्राम १,२५००० हजार देखि १,६०००० रुपैया सम्म रहेको छ । यो विश्व कै सबैभन्दा महंगो मुल्यमा बिक्ने पनीर हो ।
स्लोबोदान सिमिक भन्नुहुन्छ, पोथी गधाको दुध अति लाभकारी एवं पोषिलो हुन्छ, यसमा आमाकै दुधको जस्तो गुण रहेका हुन्छन ।
उहाँको दावी छ म भन्दा पहिला कसैले पनि गधाको दुध बाट पनीर बनाएको छैन उहाँ यस प्रोडक्ट माथी आफ्नो एकाधिकार रहेको दावी गर्नुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार पोथी गधाको दुधमा कैसीन प्रोटीन स्तर कम रहेकोले यस बाट पनीर बनाउन गाह्रो हुनेगर्छ ।सामान्यतया दुधमा २ किसिमका प्रोटीन हुन्छन कैसीन र ह्वे प्रोटीन ।
गधाको ’लो कैसीन प्रोटीन’ दुधबाट पनीर बनाउने आइडियाका क्रममा उहाँलाई यसको प्रविधि हात लाग्यो र गधाको दुधबाट पनीर बनाउने सफलता पाएको उहाँ सुनाउनुहुन्छ ।
यस कारण उहाँले बनाउने पनीरको मात्रा अति कम रहेको हुन्छ । यस पनीरको उत्पादन कम भएकाले यसको मुल्य चर्को रहेको छ र चर्को मुल्यको बाबजुद पनि यसको लोकप्रियता बढ्दै गईरहेको छ ।